Accueil > Gazetin'ny nosy > Ny fijerin’ny olona ny govenemanta Ntsay Christian
Ny fijerin’ny olona ny govenemanta Ntsay Christian
Olona vitsivitsy no nilaza ny heviny ary dia tsorina avy hatrany fa diso fanantenana tamin’ny firafitr’izany governemanta izany izy sy ny olona notendrena ao anatiny.
Toy izao indrindra no filazan’ireny olona ireny:
-Depiote Milavonjy avy any Androy: (HVM)
Ny reniny natao Minisitra ary ny zanany natao talen’ny kabinetran’ny praiminisitra. Izany ve dia mba ho azo ekena (manambara ny fanendrena an-dRazanamahasoa Christine sy Herizo zanany ity depiote avy any androy ity amin’izany). Izany ve hoy izy no fanovana notakiana teny an-kianja? Tena ady seza no ataon’ireo Mapar ireo hoy izy ka tsy ekena izany fa famitahana vahoaka
– James Ratsimba :
Mafia sy jiolahy mizara remby i Hery Rajaonarimampianina, Andry Nirina Rajoelina sy Ravalomanana Marc. Tafiditra ao anatin’ny vovon’ny komity iraisam-pirenena ireo. Tsy misy rafitra vanona izany eto fa tsy maintsy ravana io.
– Pety Rakotoniaina :
Manamafy ny voalaza teo aloha izao fa tena mpamitaka sy mpandainga ingahy Andry Nirina Rajoelina. Tsy mendrika ny hitondra firenena intsony izy fa potika i Madagasikara raha mbola miverina eo izy sy Rajaonarimampianina. Loza ho an’ny firenena izy roalahy ireo ka tokony hitandrina mafy ny Malagasy.
– Nicolas depiote (HVM)
Mazava izany izao fa tsy hilatsaka ho fidiana intsony i Hery Rajaonarimampianina fa manao izay hahavitany ny fe-potoam-pitondrany fotsiny. Anjaranay mpomba azy sisa no mieritreritra na mbola hijanona ao na hiala. Tsy araka ny tokony ho izy ny zavatra nataony.
– Ramatoa Mavo sy Estelle Ankatso
Lany vorona hatono angaha ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina sy Ntsay Christian ity no mitono goaika? Sa lany olona eto Madagasikara no olona toa ireo no notendreny? Inona no hovitan’ireo?
– Ninie Toamasina
Tokony hiala ity Pm vaovao Ntsay Christian ity fa manaonao foana. Tsy ho tody hatramin’ny farany io governemanta io.
– Tangalamena HVM iray avy any Ambatondrazaka :
Angaha lany ny olona mahay ny avy aty Antsihanaka no tsy nisy olona voatendry na iray aza?
Ampahany tamin’ireo olona nifandray taminay mahakasika ny fanendrena sy ny fitsanganan’ny governemanta Ntsay Christian ireo.